Kunokushintshile kwiRenault Duster entsha | Isolezwe
Kunokushintshile kwiRenault Duster entsha
ezezimoto / 7 October 2018, 5:24pm / MCEBO MPUNGOSE
IRENAULT Duster entsha ethulwe abakwa-Renalt ngesonto eledlule
IZAZI zomnotho kamuva nje zivame ukukhumbuza abathengi bakuleli ukuthi babophe izifociya ngoba isimo somnotho asikezukuba ngcono njengamanje.
Kuleli sonto ongoti kwezezimoto baqinisekise izindaba zokuthi uphethroli kuleli uzonyuka ngoR1.01 ilitha, okuchaza ukuthi ilitha selizobiza uR17.
Lezi zindaba ngizithola nje, ngesonto eledlule abakwaRenault basimeme eMpumalanga ukuzovivinya iRenault Duster entsha abalindele lukhulu kuyona kwazise ingenye yezimoto zabo ezidayise kahle ngonyaka odlule kuze kugamanxe nakulo nyaka. Kusukela ingenile emakethe abakwaRenault baveze ukuthi sebedayise amaDuster angaphezulu kuka-2 million emhlabeni.
Kunesisho sesingisi esivamile kubahlaziyi nabaqeqeshi bebhola, sokuthi uma uthole iqembu elikunqobela imidlalo, ungaliguquli. Ngicabanga ukuthi nonjiniyela bakwaRenault, eFrance, babecabanga okufanayo ngesikhathi benza iDuster yakamuva kwazise ayiyishiyi kakhulu eyanyakenye kodwa kwenziwe izinguquko ezinqala ezizoyenza incintisane kangcono nezimoto ebhekene nazo esigabeni sayo futhi iqhubeke nokudayisa kahle.
Phakathi kwalezi zinguquko ezinziwe ngezithinta ukubukeka kwayo ngaphandle nangaphakathi, ubuchwepheshe nendlela eshayeleka ngayo emgwaqeni.
Njengoba bengishilo, ukonga kwalemoto yikho okungithathe kakhulu njengoba idla * -4.8 wamalitha njalo ngebanga eliwu0-100km. Ngaphezu kwalokho inani lale moto liqala ku R249 000, okuyinani elihle kakhulu.
Ngosuku lokuqala siyishayele ibanga elingaphezulu kuka-200 km, futhi lutho ukunyakaza isikali sikaphethroli. Kube isimo esifanayo nangosuku olulandelayo. Phakathi kobuchwepheshe obusha obungithathile yiHill Decent Control, elekelela imoto yehle ngobunono entabeni ngokunciphisa ijubane kunokuthi igijime ngamandla.
Iphinde ibe neMultiView Camera neBlind Spot Detection okuwubuchwepheshe obuqinisa ukuphepha kwemoto yakho. Ngaphezu kwalokho iza ne Anti-Lock Braking System (ABS), Electric Brake Force (EBD) ne-Emergency Brake Assist (EBA), okulekelelayo uma udinga ukumisa imoto esimeni esibucayi.
Ngesikhathi ngishayela i-1.5 dCi Dynamique (4x2) yeDuster ngiqaphelile ukuthi ishayeleka kamnandi etiyeleni ngokunjalo nasemgwaqeni owubhuqu onamatshe. Noma ithintiwe lapha nalaphaya emzimbeni, bezama nokunciphisa umsindo uma ushayela emgwaqeni onguthelawayela, umsindo womoya usaphezudlwana ngaphakathi.
Ikhona ilibamba kahle awethuki ngisho ngabe kuthiwa uhamba ngesivinini esithe ukuba phezulu kancane. Uma isobhuqwini noma inenjini encane, amandla ewakhiqizayo angu-66kW anele ukuthi ihambe kahle emgwaqeni walolu hlobo.
IDuster 4X4 EDC ne 4x4 Manual yona iza namandla afinyelela ku-80kW.
Ngaphakathi izihlalo zinesikhala esanele phakathi kwazo ukuthi wonke umuntu ahlale ngokukhuleka kanti nasemuva ebhuthini izilayisha kahle izikhwama.
Kamuva nje kunozakwethu othe unesifiso sokuthenga i-SUV encane, wangibuza ngale moto ngamazisa ukuthi uma ezimisele ngemoto eshayela kahle emgwaqeni, enkulu, ebukekayo futhi eyongayo, iDuster ngenye yezimoto okumele zibe sohlwini lakhe, futhi kumele ibe phezulu.
Leatherseats R10 088
ZIPHUMA newarranty yeminyaka emihlanu noma * -150 000km, anti-corrosion warranty yeminyaka eyisithupha neservice plan yeminyaka emithathu noma * -45 000. Kumele iye kwisevisi ngemuva kokuhamba * -15 000km.